PiYo Workout DVD Special Offer: 4 FREE Zvipo Nekutenga
musha » Beachbody » PiYo Workout DVD Special Offer: Gamuchira 4 FREE Zvipo Nekutenga
Kubudirira Kwemagariro Kunopa Kuvandudzwa Kutsva kubva kuBlackbody kweBrand New PiYo Workout DVD Set!
Gamuchira 4 FREE Zvipo Nokutenga Kwako Chalene Johnson's PiYo Workout
Chii chinonzi PiYo Workout?
PiYo ibasa rakashanda rakagadzirwa naChalene Johnson. Chalene Johnson muchengeti wemhando yepamusoro, amai veviri, uye New York Times zvakanakisa kutengesa munyori. Chalene yakagadzirwa PiYo nokuti yaida kubatanidzwa iyo yaizopa zvakaoma matambudziko asi kwete kuisa marwadzo mumuviri wako. PiYo inobatanidza tsvina yekuchinyorwa kwePilates, kushanduka kweYoga, uye kusina-stop fluid movement. Hakuchina zviremba zvinosanganiswa nebasa iri. PiYo haina kufanana ne Yoga kana Pirates yechikoro. Iwe haufaniri kubata kwenguva yakareba, zvakanyanya kunetseka. PiYo inokura zvinhu zvose nechisimba chekufamba kwemhepo kunokonzera kukanganisa koriori kupiswa.
PiYo inouya ne8 workouts pa 3 DVDs. MaDVD akabatanidzwa anowirirana: Zvinonzi Fundamentals, Tsanangura: Muviri Wakadzika, Tsanangura: Muviri Wakadzika, Kupika, Chekuita, Simba Rakasiyana, Drench, & Sculpt.
Gadzirisa: Izvo zvinodiwa - Basa iri rinoputsa zvakakosha uye zvinobudirira zvinoitika muzvirongwa zvekubatsira iwe kukwanisa fomu yako uye kuwana mhinduro dzakanakisisa dzinogoneka
Tsanangurai: Muzasi Muviri - Tora makumbo ako akareruka uye akareruka nguva dzose sezvaunowedzera uye usimbise muviri wako wose wepasi-kubva pamaruva ako uye hamstrings kumhuru dzako.
Tsanangura: Muviri Wakadzika - Shandisa iri basa rinoshamisa rekuita basa kuti utange kushevedza pamuviri wako wepamusoro kuti ubatsire kuumba maoko ako, kubvisa zvigaro zvako, uye kutsanangura mafudzi maduku.
Sweat - Chimiro chekuita piYo chinosanganisira kugadzirisa mafungiro ekugadzirisa, kushamwaridzana kwema cardio yoga-flows, uye muviri wekudzivirira simba simba kudzidzisa kubatsira kubvisa muviri wako wose.
moyo - Izvi zvinowanzoita simba rako kubva kumativi ose kuti uite nheyo yakasimba, yakagadzikana, yakarongedzerwa kubvumira uye kubvumira, pamwe chete nesimba rakasimba uye rakasununguka kumashure.
Strength Intervals - Maminitsi makumi maviri nemashanu ndeyekuti unoda izvi zvisingashandisi muviri-kuveza, koriori-inopisa muviri inoshandisa iyo isingashandisi zviyereso, kwete mimwe midziyo, uye inokupa pasina chiremera!
Drench - Kuita basa rokutsungirira kunowedzera mafuta ekupisa apo inoshanda mushuga wose mumuviri wako. Izvo hazvingokusiyi iwe chete zvakakonzera-iyo inotanga kutanga mastabolism yako apo iwe unoparadza mafuta.
Sculpt - Basa iri rinoshandisa zviratidzo zvakasiyana-siyana kuti uchengetedze misumbu yako pasi penguva dzakasiyana-siyana. Izvi zvinokurudzira musimba kutsungirira uye kuchinja kwemagetsi kunogona kuchinja zvachose chimiro chako.
Zvakare zvakabatanidzwa nePio is quick start guide iyo inokupa zvose zvaunoda kuti utange uye pepa yePiyo 60-Day Workout.
Ndezvipi FREE Gifts?
Kana iwe ukarayira PiYo Workout nhasi, uchawana MAHURI emabhonasi zvipo. Iwe uchatora rimwe rinoshandiswa dvd rinonzi Buns. Basa reBuns rinotarisa pane yako glutes. Yakagadzirirwa kusimudza, kuchenesa, uye kusimbisa mushure mako wose wemuviri wako. Iwe uchawanawo Get Lean Eating Plan, tape chiyero, uye uwane 24 / 7 rubatsiro rwepakombiyuta runosanganisira mazano uye chete kukokwa kuti urarame nhaurirano dzevhidhiyo naChalene Johnson.
Hazvive chokwadi kana PiYo Workout Yakakunakira Iwe?
Kana iwe usingazivi kana PiYo yakakodzera iwe, PiYo inouya ne 60-DAY MONEY-BACK GUARANTEE! (zvishoma s & h). Wakamirira chii? Raira PiYo nhasi! Dzvanya mufananidzo uri pasi apa kuti utange
* The PiYo Workout 4 FREE Zvipo Zvokupa Zvakavimbiswa seZV 8 / 7 / 14 2: 00 PM EST. Mutengo wemiti uye kushandiswa kwakarurama sekune zuva / nguva inoratidzwa uye inogona kuchinja. Chero mutengo uye ruzivo ruzivo rwakaratidzwa paBlackbody panguva yekutenga ichashandiswa pakutenga kwechiito ichi DVD.